ဘာသာစကား လိုက်စားသူတို့ အတွက် ဝေါဟာရအသစ်များ လေ့လာနည်း ၁၀ ခု - Myanmar Network
ဘာသာစကား လိုက်စားသူတို့ အတွက် ဝေါဟာရအသစ်များ လေ့လာနည်း ၁၀ ခု
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on March 8, 2017 at 13:40 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဘာသာစကား လေ့လာသူတစ်ဦးအနေနဲ့ သင်ဟာ ဝေါဟာရ အသစ်တွေကို တိုးပွားအောင် အမြဲ ကြိုးစားရပါတယ်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဝေါဟာရ စာရင်း အရှည်ကြီးတွေရေးမှတ်တာတို့၊ flash card ဝေါဟာရကဒ်ပြားတွေနဲ့ လေ့ကျင့်တာတို့လုပ်ပြီး စကားလုံးအသစ်တွေကို မွှေနှောက်ရှာဖွေ မှတ်သားရတယ်။ ဒါပေမဲ့ စကားပြောမယ်လည်း ကြံလိုက်ရော ခေါင်းထဲက ကျက်မှတ်ထားတဲ့ စကားလုံးတွေ ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက် ပျောက်ကုန်ကြလို့ နောက်ဆုံးတော့ သင်အကြိမ်ကြိမ်သုံးခဲ့ဖူး၊ သိခဲ့ဖူးတဲ့ စကားလုံး အဟောင်းတွေကိုဘဲ ပြောင်းသုံး ပြောရတာဘဲမဟုတ်ပါလား။
ဘာသာစကား လေ့လာသူတွေအတွက် စကားလုံး အသစ်တွေကို မှတ်မိတာနဲ့ စကားပြောရာမှာ စကားလုံး အသစ်တွေကို သုံးတာတို့ဟာ အလွန်ခက်ခဲတဲ့ အရာပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အောက်မှာ စကားလုံး အသစ်တွေကို စွဲမြဲအောင် မှတ်မိရုံမျှမကဘဲ စကားပြောတဲ့ အခါမှာပါ ပြန်သုံးတတ်အောင် ကူညီပေးမယ့် ဗျူဟာအချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ ကျဘန်းဝေါဟာရ မဖြစ်စေနဲ့
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ်နဲ့ သက်ဆိုင်တာကိုဘဲ မှတ်မိလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် စကားလုံးပေါင်းစုံ ရောရောပါဝင်တဲ့ ဝေါဟာရ စာရင်း ပြုစုတာ ဒါမှမဟုတ် index card (ဝေါဟာရကဒ်) ပြုလုပ်တာတို့တွေဟာ နောင်တစ်ချိန်မှာ အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကို ပြန်လည်မှတ်မိဖို့၊ ပြန်လည်အသုံးချဖို့အတွက် သိပ်ပြီး ထိရောက်မှု မရှိဘူးလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ ဝေါဟာရ စာရင်းတို့ ဝေါဟာရကဒ်တို့ဟာ သင်သိပြီးသား၊ လေ့လာထားပြီးသား စကားလုံးတွေကို ပြန်နွှေးရုံအတွက် ဆိုရင်တော့ အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စကားလုံးအသစ်တစ်လုံးကို စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်မိနို်င်အောင် လုပ်ချင်ရင် မိမိအတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ (သက်ဆိုုင်မှုရှိတဲ့) အရာတစ်ခုခုနဲ့ အဲ့ဒီစကားလုံး အသစ်ကို ချိတ်ဆက်ပြီး မှတ်သားပါ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ စိတ်ဝင်စားတဲ့၊ အရမ်းစွဲလမ်းတဲ့ အကြောင်းအရာ context တစ်ခုခုထဲမှာ ထည့်သုံးတဲ့ စကားလုံးကို သင်ကပုိပြီး ကောင်းကောင်းမှတ်မိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ- သင်က ဘောလုံးဝါသနာအိုးတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ‘unstoppable’ (တားဆီး၍မရ) ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ တစ်လုံးတည်းဖြစ်စေ၊ သာမန်စာကြောင်းမျိုး ဥပမာ - Some people are unstoppable. ဆိုတဲ့ စာကြောင်းမှာ ပါတာမျိုးထက် ‘Messi is unstoppable.’ (တိုက်စစ်မှုး မက်ဆီကို ဘယ်သူမှ မတားဆီးနိုင်ဘူး) ဆိုတဲ့ စာကြောင်းမှာလိုမျိုး ဆိုရင် သင့်အတွက် ပိုမှတ်မိနိုင်ခြေ များစွာဖြစ်ပါတယ်။
အကြံပြုချက် ။ ဗြိတိသျှကောင်စီရဲ့ LearnEnglish website ဝဘ်ဆိုဒ်မှာ အပြန်အလှန် လေ့ကျင့် ပြောဆိုလို့ရတဲ့ ဗီဒီယိုတွေ၊ ဂိမ်းတွေ၊ podcast တွေ အပုံအပင်ရှိပါတယ်။ သင်ဘာကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဖြစ်ဖြစ် သင့်အတွက် ရွေးစရာတစ်ခုခုကတော့ အမြဲရှိနေပါတယ်။ အခြားသော လေ့လာသူတွေနဲ့လဲ သင့်အတွေးအမြင်တွေ ဖလှယ်လို့ရပါတယ်။
၂။ စကားပြောတွေကို အတွဲလိုက်လေ့လာပါ
အကယ်လို့ စကားကို အတွဲလိုက် (စကားလုံးအများကြီးပါတဲ့ စကားစု အတွဲလိုက်) ဒါမှမဟုတ် စကားပြော scripts (ပုံသေကားကျ အပြန်အလှန်ပြောဆိုပုံ) စတာတွေနဲ့ လေ့လာရင် ပိုမိုစွဲမြဲစွာ မှတ်မိပါတယ်။ ဥပမာ - phrasal verb ဖြစ်တဲ့ ‘to come up with’ ကိုဒီအတိုင်းဘဲ အလွတ်မှတ်မဲ့အစား phrase တစ်ခုရဲ့ အစိတ်အပိုင်း ‘to come up with an idea’ ဆိုပြီး ကျက်မှတ်ပါ။ ဒီနည်းနဲ့ ကျက်မှတ်ရင် ဒီ phrasal verb ကို ဝါကျတစ်ကြောင်းမှာ ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကို အနည်းဆုံးတော့ သင်သိသွားမှာပါ။ အလားတူဘဲ ‘hello’ နဲ့ ပုံစံတူတဲ့ နှုတ်ဆက်နည်း ၃၃ မျိုးကို ကျက်မှတ်မဲ့အစား အပြန်အလှန် စကားပြောပုံစံ ဖြစ်တဲ့ ‘Hello, how are you? – I’m fine, thank you.’ ဆိုပြီး ကျက်မှတ်ပါလေ။
အကြံပြုချက် ။ အကယ်လို့သင်က ဗွီဒီယို၊ တီဗွီ၊ ရုပ်ရှင် စတာတွေနဲ့ လေ့လာရတာ ကြိုက်တယ်ဆိုရင် FluentU ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ အဲ့ဒီထဲမှာ အပြန်အလှန် ကျင့်လို့ရတဲ့ caption စာတမ်းထိုးတွေ ပါဝင်ပြီး၊ စကားလုံး တစ်လုံးပေါ် ထောက်ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ ရုပ်ပုံတွေ၊ အနက်အဓိပ္ပါယ်တွေ အပြင်အသုံးဝင်တဲ့ ဥပမာတွေပါ ဖော်ပြပေးပါတယ်။ ဖတ်စရာ အကြောင်းအရာထဲမှာ သုံးထားတဲ့ စကားလုံးတွေကို အထူးပြုတဲ့ အခြား စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းတဲ့ သင်ထောက်ကူ သင်ခန်းစာအရင်းအမြစ် တွေလည်း တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ ဥပမာ -'SpeakSmart' collection on Instagram မှာဆိုရင် စကားလုံးတွေ၊ ပြောစကားတွေအတွက် ဥပမာတွေကို လူကြည့်များတဲ့ ရုပ်သံစီးရီးတွေထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းပေါင်းများစွာ အသုံးပြုပြီး ရှင်းပြပါတယ်။ အကယ်လို့သင်က စာဖတ်ရတာ ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင် စာပိုဒ်တို short text လေးတွေကို ဖတ်ပါ။ ဥပမာ - ကာတွန်း ဖတ်တာလိုမျိုးပေါ့။ Grammarman လိုမျိုး ဘာသာစကား လေ့လာသူတွေအတွက် ကာတွန်းအပါအဝင် ဖတ်ရင်း နားထောင်လို့ရတဲ့ ကာတွန်းတွေလည်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အမြောက်အများ ရှိနေပါပြီ။
၃။ သင့်ရဲ့ စိတ်တွင်းက အသံကို အသုံးချပါ
သင်ယူ လေ့လာတယ်ဆိုတာ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ စကားလုံးတစ်လုံးကို လေ့လာရင် သင့်ရဲ့ စိတ်တွင်းက အသံရဲ့ ကမ္ဘာထဲကို အရင်ဝင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အောက်ပါနည်းလမ်းကို စမ်းကြည့်ပါ။ စကားလုံး/ စကားတွဲ phrase တစ်ခုကို တစ်ကြိမ်နားထောင်ပါ။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီစကားလုံးကို ခေါင်းထဲကနေ (စိတ်ထဲကနေ) နားထောင်ပါ။ ပြီးတော့ ခေါင်းထဲကဘဲ ပြောကြည့်ပါ။ ပြီးတော့မှ ပါးစပ်ကနေ ကျယ်ကျယ်ပြောပါ။ မိမိရဲ့ ပြောသံကို အသံသွင်းထားပြီး ပြန်နားထောင်ကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ သင်ကြားရတဲ့ အသံနဲ့ သင့်စိတ်ထဲက အသံတူသလား။ တစ်ထပ်တည်းလားဆိုတာ နားထောင်ကြည့်ပါ။
အကြံပြုချက် ။ Forvo မှာဆိုရင် native speaker တွေ non-native speaker တွေရဲ့ အသံထွက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က စကားလုံးအမျိုးမျိုး၊ စကားတွဲအမျိုးမျိုးကို နားထောင်လို့ ရပါတယ်။ နားထောင်ချင်တဲ့ စကားလုံးကို ရိုက်ထည့်ပါ။ ပြီးတော့ speaker ကို ရွေးချယ်ပြီးတော့ လေ့ကျင့်ရုံပါဘဲ။
၄။ စကားလုံး၊ စကားတွဲတွေ ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာ စိတ်ကူးပုံဖေါ်ကြည့်ပါ
စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို စာရွက်ပေါ်မှာ သို့မဟုတ် စိတ်ကူးထဲမှာ သရုပ်ဖော် ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ဘယ်အချိန်မှာ ပြန်ကြားကြား အဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ချက်ခြင်း ပြန်မှတ်မိဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ ဒီနည်းကတော့ အီဒီယံတွေ ဥပမာ - to keep one’s mouth shut (informal) (ဘာမှမပြောဘဲ နှုတ်ဆိတ်နေသည်) လိုဟာမျိုးတွေ မှတ်ရာမှာ အကူအညီရပါတယ်။
အကြံပြုချက် ။ Visuwords ဆိုတဲ့ ပုံပြနဲ့ သံကွဲကြောင်းတူ အဘိဓာန် visual dictionary and thesaurus မှာလည်း စကားလုံးရဲ့ ပုံအပြင် မှာလည်း စကားလုံးတွေ ဆက်စပ်ပုံ ကိုလည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
၅။ တွဲမှတ်လို့ ရတဲ့ ရီစရာလေးတွေ ဖန်တီးပါ
Mnemonic လို့ခေါ်တဲ့ စကားလုံးနဲ့ သူ့ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကြားထဲက ဆက်စပ်မှုကို ခိုင်မြဲစေမဲ့ ရီစရာ စကားစု သို့မဟုတ် ပုံပြင်လေးတွေ ဖန်တီးကြည့်ပါ။ စာလုံးပေါင်းရခက်တဲ့ စကားလုံးတွေကို ကျွန်တော်ပြန်အစဖော်ပြီး မှတ်မိအောင် လုပ်တဲ့အခါတိုင်း ဒီနည်းလမ်းက ထိထိရောက်ရောက် ရှိလှပါတယ်။
အောက်မှာတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကျောင်းသားတွေ ဖန်တီးထားတဲ့ mnemonic တွေပါ။
‘career’ - car and beer
‘island’ - is land
‘to lose’ – un-oh, I’ve lost an ‘O’ (အိုတစ်လုံး ပျောက်သွားပြီ) (loose နဲ့ မမှားရအောင် မှတ်တဲ့ နည်း)
အကြံပြုချက် ။ Memrise ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်မှာ သုံးစွဲသူတွေ ဝိုင်းပြုစုထားကြတဲ့ ‘memes’ ဆိုတာမျိုးတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိမိကိုယ်တိုင် တီထွင် ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်တော့ စကားလုံးတွေကို ပိုပြီးမှတ်မိမယ့် အခွင့်အလန်းပိုများတာပေါ့။
၆။ အချိန်ခြားပြီး ပြန်ရွတ်ဆိုသုံးစွဲတဲ့ နည်းလမ်းသုံးပါ
စကားလုံးအသစ်တွေကို အကြိမ်ကြိမ်ပြန်လည် ရွတ်ဆိုကျက်မှတ်ပေးတာဟာ မှတ်ဥာဏ်မှာ စွဲစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့တည်းမှာ ဝေါဟာရအသစ်တွေကို အကြိမ်ရာပေါင်းများစွာ ရွတ်ဆိုကျက်မှတ်တာဟာ spaced repetition လို့ခေါ်တဲ့ ရက်များများ သို့မဟုတ် အပတ်များများ ကာလတစ်ခုထဲမှာ ပြန်လှန်ဆွေးနွေးပြီး ကျက်မှတ်တာလောက် ထိရောက်မှုမရှိပါဘူး။ ဝေါဟာရအသစ်တွေကို ချက်ခြင်းအသုံးပြုပါ။ ပြီးတော့ တစ်နာရီလောက်ခြားပြီးတော့မှ မှတ်မိသေးလား ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အိပ်ယာမဝင်ခင် နောက်တစ်ခါ စဉ်းစားပြီး နွှေးပေးပါ။ နောက်ထပ်တစ်ရက်လောက်ခြားပြီး ပြန်သုံးပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ နောက် ၂ ရက်လောက်အကြာမှာ ပြန်လှန်လေ့လာပါ။
အကြံပြုချက် ။ ရက်ရှည် ကာလ ‘spaced repetition’ platform နဲ့ ဝါကြ အပြည့် ရေးချပြီး လေ့ကျင့်လို့ရတဲ့ Anki လို software တွေအပြင် မိမိကိုယ်ပိုင် ပြန်လှန်လေ့လာရေး revision အချိန်ဇယားကို ရေးဆွဲထား နိုင်ပါသေးတယ်။ သင့်စကားလုံး အသစ်တွေကို ကဒ်ပြားလေးတွေပေါ်မှာ တစ်ဖက်မှာ ဝါကျအပြည့် ရေးချထားပြီး ကျန်တစ်ဖက်မှာ စကားလုံးရဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်/ ဘာသာပြန်/ ပုံစသည်တွေပါတဲ့ index card လေးတွေ လုပ်ထားပါ။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီကဒ်လေးတွေကို ပြန်လှန် ကြည့်ရှု မှတ်သားဖို့ အချိန်ဇယားပြုလုပ်ပါ။ ကဒ်ပြားလေးတွေကို အစီအစဉ်တစ်ကျပြုလုပ်ပြီး အမျိုးအစား ၃မျိုးခွဲလိုက်ပါ။
အစိမ်းရောင် - နောက်ထပ်ကြည့်စရာ သိပ်မလိုတော့တဲ့ စကားလုံးများ
အဝါရောင် - မကြာခဏ ထပ်ကြည့်ပေးရမယ့် စကားလုံးများ
အနီရောင် - အကြိမ်များစွာ ထပ်ခါထပ်ခါ ကြည့်ရမယ့် စကားလုံးများ စသည်ဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။
ရ။ ဝေါဟာရရင်းမြစ်ကို ရှာဖွေလေ့လာပါ။
စကားလုံးသစ်တစ်လုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို အဘိဓာန်မှာ ရှာမကြည့်ခင် အဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို ခန့်မှန်း စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့ မူလ အရင်းအမြစ် root အပြင် prefix တွေ suffix တွေကိုပါ လေ့လာပါ။ အကယ်လို့ သင်က အခြား ဘာသာစကားအချို့ကိုလည်း နားလည်မယ်ဆိုရင် စကားလုံးတွေရဲ့ မြစ်ဖျားခံရာ တူညီမှုတွေကိုလည်း တွေ့ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စကားလုံး အသစ်တွေရဲ့ ပေါ်ပေါက်လာပုံ သမိုင်းကြောင်း အရင်းအမြစ်ကို သုတေသနလုပ်ပြီး လေ့လာရင် အဲ့ဒီစကားလုံး အသစ်တွေကို ပိုမိုမှတ်မိပါတယ်။
ဥပမာ Tea (လက်ဖက်ရည်) ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ တရုတ်စကား (Mandarin dialect ဖြစ်တဲ့ ch’a နှင့်ဆက်စပ်တဲ့) t’e ဆိုတဲ့ Amoy dialect ကနေ လာတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား။ ပြင်သစ်၊ စပိန်၊ ဂျာမနီလိုဘဲ အင်္ဂလိပ်စကားလုံး tea ဟာ အဲ့ဒီ Amoy စကား t’e ကို (ဟိုးရှေးရှေးက Dutch East India ကုမ္ပဏီက ဥရောပကို လက်ဖက်ရွက်၊ လက်ဖက်ခြောက်တွေစပြီး မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ရာမှ စတင်ပြီး) မွေးစား သုံးစွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူဘဲ ရုရှားရဲ့ Chai (လက်ဖက်ရည်) ဆိုတာဟာလည်း ဆားဗီးယား၊ ပါရှန်၊ ဂရိ၊ အာရဘီနှင့် တူရကီတို့ရဲ့ လက်ဖက်ရည်ကို ခေါ်တဲ့ စကားလုံးဖြစ်တဲ့ Chai ကဲ့သို့ဘဲ လက်ဖက်ကို ရှေးရှေးတုန်းက တရုတ်ပြည်ကနေ ကုန်သည်တွေက ကုန်းကြောင်းကနေ ကုန်သွယ်ခဲ့ရာက ခေါ်ဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအခါမှာတော့ tea ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သင်ကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ အငွေ့တစ်ထောင်းထောင်း ထနေတဲ့ လက်ဖက်ရည်ခွက် ကလေးကို ပြေးမြင်ပြီး သင့်နိုင်ငံကို လက်ဖက် ဘယ်လို ရောက်လာသလဲ ဆိုတာပါ သိန်ိုင်ပြီပေါ့။
အကြံပြုချက် ။ စကားလုံးတွေ၊ အီဒီယံတွေရဲ့ စတင်ရာ ရင်းမြစ်တွေကို လေ့လာချင်ရင် Online Etymology Dictionary ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်ဟာတော်တော်လေး ကောင်းမွန်ပါတယ်။
၈။ မိမိကိုယ်ကို စကားလုံးအသစ်တွေနဲ့ စိန်ခေါ်ကြည့်ပါ
စိန်ခေါ်တယ် ဆိုတဲ့ အသိတရားက သင့်ရဲ့ ဦးဏှောက်ကို နိုးဆွပေးပါတယ်။ စကားလုံးတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်အသစ်တွေ၊ ဒါမှမဟုတ် စကားလုံးအသစ်တွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိစေတဲ့ game တွေဟာသင့်ရဲ့ ဝေါဟာရကို ကြွယ်ဝစေဖုိ့အတွက် ပျော်စရာနည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
အကြံပြုချက် ။ Quizlet.com မှာ ဥာဏ်စမ်းတွေ၊ ဂ်ိမ်းတွေ အများကြီးရှိပြီး ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
စကားလုံးအသစ်တွေကို (ဒါမှမဟုတ် စကားလုံးအသစ်ကိုထည့်သုံးထားတဲ့ ဝါကျတွေကို) ချရေးခြင်းအားဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ရော စာလုံးပေါင်းအတွက်ပါ သင့်မှတ်ဥာဏ်ထဲမှာ စွဲလမ်းနေစေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ သင် သို့မဟုတ် သင်သိတဲ့ သူတစ်ယောက်ယောက်အတွက် လက်တွေ့ကျတဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို တွေးပြီး ရေးချပါ။
အကြံပြုချက်။ ။ အဲ့ဒီချရေးထား၊ မှတ်ထားတဲ့ ဝါကျတွေကို ကိုယ့်အတွက်ဘဲ ဒီအတိုင်း မှတ်ထားမယ့်အစား Folding Story လို့ခေါ်တဲ့ စာရေးတဲ့ ဂိမ်းတွေဆော့တဲ့ ဆိုဒ်မှာ အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ ဒီဆိုဒ်ကတော့ ဝင်ကစားသူ တစ်ယောက်စီက story ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်မှာ စာတစ်ကြောင်း ဝင်ရေးလိုက်ပြီး နောက်တစ်ယောက်က နောက်တစ်ကြောင်းဝင်ရေးကာ ဇာတ်လမ်းကို ဆက်ဆက်ပေးသွားရတဲ့ online writing game ကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအွန်လိုင်း ကစားနည်းမှာ ပါဝင်ကစားသူတစ်ဦးဆီမှာ စာတစ်ကြောင်း ဝင်ရေးဖို့ သုံးမိနစ်သာ အချိန်ရပြီး အဲ့ဒီ ကန့်သတ်အချိန်အတွင်း ဝင်ရေးတဲ့ စာကြောင်းတွေအပေါ် Like ရတဲ့ အရေအတွက် အပေါ်မူတည်ပြီး အမှတ်ရပါတယ်။
၁၀။ လက်တွေ့အကြောင်းအရာတွေအကြောင်း ပြောပါ
စကားလုံးအသစ်တွေကို ဘယ်လောက်ဘဲ မှတ်မိအောင်ကျက်မှတ်ထားဦး မိမိလက်တွေ့ အသုံးပြုခါနီးမှာ လျှပ်တစ်ပျက် ထုတ်သုံးတတ်ဖို့ လွယ်ကူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ နည်းလမ်းကတော့ အင်္ဂလိပ်လို နှစ်မိနစ် သုံးမိနစ်စာလောက် လုံးဝမရပ်ဘဲ မပြတ်တမ်းပြောတဲ့ မိမိရဲ့အသံကို အသံပြန်ဖမ်းထားပါ။ ပြောရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကအရာတွေကို ပြန်ဖော်ပြတာ၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ မိမိရဲ့သဘောထားထက်မြင်ချက်တွေကို ပြောတာမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ မိမိရဲ့ ပြောစကားတွေကို ပြန်နားထောင်ရင်း ဘယ်လိုစကားလုံးမျိုးတွေ သုံးသွားတယ်ဆိုတာ ပြန်နားထောင်ပါ။ မိမိလေ့လာထားပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုလိုတဲ့ စကားလုံးတွေကို အသုံးပြုခဲ့ပါသလား။ စကားလုံးအသစ်တွေနဲ့ အစားထိုးပြောလို့ရတဲ့ စကားလုံးအဟောင်းတွေကိုဘဲ ပြန်သုံးခဲ့ပါသလား။ ပြီးတော့မှ မိမိပြောင်းသုံးချင်တဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ အစားထိုးပြီး ပြန်ပြောတာကို အသံပြန်ဖမ်းတာထပ်လုပ်ပါ။ ဒါဆို ပိုကောင်းပါသလား။
အကြံပြုချက် ။ The Polyglot Club လိုမျိုး အွန်လိုင်းဘာသာစကားလေ့လာသူများ ကလပ်ကို ဝင်ပြိး တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိတဲ့ native speaker တွေနဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးတာတို့၊ လေ့ကျင့်တာတို့ လုပ်လို့ရပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ ကျွန်တော် ရဲ့ ထိပ်တန်းအကြံပြုချက် ၁၀ ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင့်ထံမှာ သင့်အတွက် အလုပ်ဖြစ်မယ့် ဒီထက်ကောင်းတဲ့ အကြံဥာဏ်တွေ နည်းလမ်းတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုခုရတဲ့ အထိ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ပါလေ။ အကောင်းဘက်ကနေ အမြဲတမ်းကြည့်ပြီး မိမိလုပ်သမျှကို ကျေနပ်ပြီး ပျော်ရွှင်ပါစေ။
British Council Voices Magazine မှ Svetlana Kandybovich ၏ Ten ways to learn new words asalanguage learner ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာစကား လလေ့ာသူတဈဦးအနနေဲ့ သငျဟာ ဝေါဟာရ အသဈတှကေို တိုးပှားအောငျ အမွဲ ကွိုးစားရပါတယျ။ နစေ့ဉျနတေို့ငျး ဝေါဟာရ စာရငျး အရှညျကွီးတှရေေးမှတျတာတို့၊ flash card ဝေါဟာရကဒျပွားတှနေဲ့ လကေ့ငျြ့တာတို့လုပျပွီး စကားလုံးအသဈတှကေို မှနှေောကျရှာဖှေ မှတျသားရတယျ။ ဒါပမေဲ့ စကားပွောမယျလညျး ကွံလိုကျရော ခေါငျးထဲက ကကျြမှတျထားတဲ့ စကားလုံးတှေ ကွကျပြောကျ ငှကျပြောကျ ပြောကျကုနျကွလို့ နောကျဆုံးတော့ သငျအကွိမျကွိမျသုံးခဲ့ဖူး၊ သိခဲ့ဖူးတဲ့ စကားလုံး အဟောငျးတှကေိုဘဲ ပွောငျးသုံး ပွောရတာဘဲမဟုတျပါလား။
ဘာသာစကား လလေ့ာသူတှအေတှကျ စကားလုံး အသဈတှကေို မှတျမိတာနဲ့ စကားပွောရာမှာ စကားလုံး အသဈတှကေို သုံးတာတို့ဟာ အလှနျခကျခဲတဲ့ အရာပငျဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အောကျမှာ စကားလုံး အသဈတှကေို စှဲမွဲအောငျ မှတျမိရုံမြှမကဘဲ စကားပွောတဲ့ အခါမှာပါ ပွနျသုံးတတျအောငျ ကူညီပေးမယျ့ ဗြူဟာအခြို့ကို ဖျောပွလျိုကျပါတယျ။
၁။ ကဘြနျးဝေါဟာရ မဖွဈစနေဲ့
ကြှနျတျောတို့ဟာ ကိုယျနဲ့ သကျဆိုငျတာကိုဘဲ မှတျမိလရှေိ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ စကားလုံးပေါငျးစုံ ရောရောပါဝငျတဲ့ ဝေါဟာရ စာရငျး ပွုစုတာ ဒါမှမဟုတျ index card (ဝေါဟာရကဒျ) ပွုလုပျတာတို့တှဟော နောငျတဈခြိနျမှာ အဲ့ဒီစကားလုံးတှကေို ပွနျလညျမှတျမိဖို့၊ ပွနျလညျအသုံးခဖြို့အတှကျ သိပျပွီး ထိရောကျမှု မရှိဘူးလို့ ဆိုခငျြပါတယျ။ ဝေါဟာရ စာရငျးတို့ ဝေါဟာရကဒျတို့ဟာ သငျသိပွီးသား၊ လလေ့ာထားပွီးသား စကားလုံးတှကေို ပွနျနှေးရုံအတှကျ ဆိုရငျတော့ အသုံးဝငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ စကားလုံးအသဈတဈလုံးကို စှဲစှဲမွဲမွဲ မှတျမိနျိုငျအောငျ လုပျခငျြရငျ မိမိအတှကျ အဓိပ်ပါယျရှိတဲ့ (သကျဆျိုငျမှုရှိတဲ့) အရာတဈခုခုနဲ့ အဲ့ဒီစကားလုံး အသဈကို ခြိတျဆကျပွီး မှတျသားပါ။ သငျကွိုကျနှဈသကျတဲ့ စိတျဝငျစားတဲ့၊ အရမျးစှဲလမျးတဲ့ အကွောငျးအရာ context တဈခုခုထဲမှာ ထညျ့သုံးတဲ့ စကားလုံးကို သငျကပျုိပွီး ကောငျးကောငျးမှတျမိမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဥပမာ- သငျက ဘောလုံးဝါသနာအိုးတဈယောကျ ဖွဈတယျဆိုရငျ ‘unstoppable’ (တားဆီး၍မရ) ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ တဈလုံးတညျးဖွဈစေ၊ သာမနျစာကွောငျးမြိုး ဥပမာ - Some people are unstoppable. ဆိုတဲ့ စာကွောငျးမှာ ပါတာမြိုးထကျ ‘Messi is unstoppable.’ (တိုကျစဈမှုး မကျဆီကို ဘယျသူမှ မတားဆီးနိုငျဘူး) ဆိုတဲ့ စာကွောငျးမှာလိုမြိုး ဆိုရငျ သငျ့အတှကျ ပိုမှတျမိနိုငျခွေ မြားစှာဖွဈပါတယျ။
အကွံပွုခကျြ ။ ဗွိတိသြှကောငျစီရဲ့ LearnEnglish website ဝဘျဆိုဒျမှာ အပွနျအလှနျ လကေ့ငျြ့ ပွောဆိုလို့ရတဲ့ ဗီဒီယိုတှေ၊ ဂိမျးတှေ၊ podcast တှေ အပုံအပငျရှိပါတယျ။ သငျဘာကို စိတျဝငျစားတယျဖွဈဖွဈ သငျ့အတှကျ ရှေးစရာတဈခုခုကတော့ အမွဲရှိနပေါတယျ။ အခွားသော လလေ့ာသူတှနေဲ့လဲ သငျ့အတှေးအမွငျတှေ ဖလှယျလို့ရပါတယျ။
၂။ စကားပွောတှကေို အတှဲလိုကျလလေ့ာပါ
အကယျလို့ စကားကို အတှဲလိုကျ (စကားလုံးအမြားကွီးပါတဲ့ စကားစု အတှဲလျိုကျ) ဒါမှမဟုတျ စကားပွော scripts (ပုံသကေားကြ အပွနျအလှနျပွောဆိုပုံ) စတာတှနေဲ့ လလေ့ာရငျ ပိုမိုစှဲမွဲစှာ မှတျမိပါတယျ။ ဥပမာ - phrasal verb ဖွဈတဲ့ ‘to come up with’ ကိုဒီအတိုငျးဘဲ အလှတျမှတျမဲ့အစား phrase တဈခုရဲ့ အစိတျအပျိုငျး ‘to come up with an idea’ ဆိုပွီး ကကျြမှတျပါ။ ဒီနညျးနဲ့ ကကျြမှတျရငျ ဒီ phrasal verb ကို ဝါကတြဈကွောငျးမှာ ဘယျလိုသုံးရမလဲဆိုတာကို အနညျးဆုံးတော့ သငျသိသှားမှာပါ။ အလားတူဘဲ ‘hello’ နဲ့ ပုံစံတူတဲ့ နှုတျဆကျနညျး ၃၃ မြိုးကို ကကျြမှတျမဲ့အစား အပွနျအလှနျ စကားပွောပုံစံ ဖွဈတဲ့ ‘Hello, how are you? – I’m fine, thank you.’ ဆိုပွီး ကကျြမှတျပါလေ။
အကွံပွုခကျြ ။ အကယျလို့သငျက ဗှီဒီယို၊ တီဗှီ၊ ရုပျရှငျ စတာတှနေဲ့ လလေ့ာရတာ ကွိုကျတယျဆိုရငျ FluentU ကိုစမျးကွညျ့ပါ။ အဲ့ဒီထဲမှာ အပွနျအလှနျ ကငျြ့လို့ရတဲ့ caption စာတမျးထိုးတှေ ပါဝငျပွီး၊ စကားလုံး တဈလုံးပျေါ ထောကျကွညျ့လိုကျရုံနဲ့ ရုပျပုံတှေ၊ အနကျအဓိပ်ပါယျတှေ အပွငျအသုံးဝငျတဲ့ ဥပမာတှပေါ ဖျောပွပေးပါတယျ။ ဖတျစရာ အကွောငျးအရာထဲမှာ သုံးထားတဲ့ စကားလုံးတှကေို အထူးပွုတဲ့ အခွား စိတျဝငျစားဖှယျ ကောငျးတဲ့ သငျထောကျကူ သငျခနျးစာအရငျးအမွဈ တှလေညျး တှနေို့ငျပါသေးတယျ။ ဥပမာ -'SpeakSmart' collection on Instagram မှာဆိုရငျ စကားလုံးတှေ၊ ပွောစကားတှအေတှကျ ဥပမာတှကေို လူကွညျ့မြားတဲ့ ရုပျသံစီးရီးတှထေဲက ဇာတျဝငျခနျးပေါငျးမြားစှာ အသုံးပွုပွီး ရှငျးပွပါတယျ။ အကယျလို့သငျက စာဖတျရတာ ဝါသနာပါတယျဆိုရငျ စာပျိုဒျတို short text လေးတှကေို ဖတျပါ။ ဥပမာ - ကာတှနျး ဖတျတာလိုမြိုးပေါ့။ Grammarman လိုမြိုး ဘာသာစကား လလေ့ာသူတှအေတှကျ ကာတှနျးအပါအဝငျ ဖတျရငျး နားထောငျလို့ရတဲ့ ကာတှနျးတှလေညျး အှနျလျိုငျးပျေါမှာ အမွောကျအမြား ရှိနပေါပွီ။
၃။ သငျ့ရဲ့ စိတျတှငျးက အသံကို အသုံးခပြါ
သငျယူ လလေ့ာတယျဆိုတာ စိတျထဲမှာ ဖွဈပျေါတဲ့ လုပျငနျးစဉျ ဖွဈပါတယျ။ စကားလုံးတဈလုံးကို လလေ့ာရငျ သငျ့ရဲ့ စိတျတှငျးက အသံရဲ့ ကမ်ဘာထဲကို အရငျဝငျဖို့လိုအပျပါတယျ။ အောကျပါနညျးလမျးကို စမျးကွညျ့ပါ။ စကားလုံး/ စကားတှဲ phrase တဈခုကို တဈကွိမျနားထောငျပါ။ ပွီးတော့ အဲ့ဒီစကားလုံးကို ခေါငျးထဲကနေ (စိတျထဲကနေ) နားထောငျပါ။ ပွီးတော့ ခေါငျးထဲကဘဲ ပွောကွညျ့ပါ။ ပွီးတော့မှ ပါးစပျကနေ ကယျြကယျြပွောပါ။ မိမိရဲ့ ပွောသံကို အသံသှငျးထားပွီး ပွနျနားထောငျကွညျ့ပါ။ ပွီးတော့ သငျကွားရတဲ့ အသံနဲ့ သငျ့စိတျထဲက အသံတူသလား။ တဈထပျတညျးလားဆိုတာ နားထောငျကွညျ့ပါ။
အကွံပွုခကျြ ။ Forvo မှာဆိုရငျ native speaker တှေ non-native speaker တှရေဲ့ အသံထှကျအမြိုးမြိုးနဲ့ ကမ်ဘာအရပျရပျက စကားလုံးအမြိုးမြိုး၊ စကားတှဲအမြိုးမြိုးကို နားထောငျလို့ ရပါတယျ။ နားထောငျခငျြတဲ့ စကားလုံးကို ရိုကျထညျ့ပါ။ ပွီးတော့ speaker ကို ရှေးခယျြပွီးတော့ လကေ့ငျြ့ရုံပါဘဲ။
၄။ စကားလုံး၊ စကားတှဲတှေ ဘယျလိုပုံစံလဲဆိုတာ စိတျကူးပုံဖျေါကွညျ့ပါ
စကားလုံးရဲ့ အဓိပ်ပါယျကို စာရှကျပျေါမှာ သို့မဟုတျ စိတျကူးထဲမှာ သရုပျဖျော ရေးဆှဲခွငျးဖွငျ့ ဘယျအခြိနျမှာ ပွနျကွားကွား အဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့ အဓိပ်ပါယျကို ခကျြခွငျး ပွနျမှတျမိဖို့ ကူညီပေးပါတယျ။ ဒီနညျးကတော့ အီဒီယံတှေ ဥပမာ - to keep one’s mouth shut (informal) (ဘာမှမပွောဘဲ နှုတျဆိတျနသေညျ) လိုဟာမြိုးတှေ မှတျရာမှာ အကူအညီရပါတယျ။
အကွံပွုခကျြ ။ Visuwords ဆိုတဲ့ ပုံပွနဲ့ သံကှဲကွောငျးတူ အဘိဓာနျ visual dictionary and thesaurus မှာလညျး စကားလုံးရဲ့ ပုံအပွငျ မှာလညျး စကားလုံးတှေ ဆကျစပျပုံ ကိုလညျး လလေ့ာနိုငျပါတယျ။
၅။ တှဲမှတျလို့ ရတဲ့ ရီစရာလေးတှေ ဖနျတီးပါ
Mnemonic လို့ချေါတဲ့ စကားလုံးနဲ့ သူ့ရဲ့ အဓိပ်ပါယျကွားထဲက ဆကျစပျမှုကို ခိုငျမွဲစမေဲ့ ရီစရာ စကားစု သို့မဟုတျ ပုံပွငျလေးတှေ ဖနျတီးကွညျ့ပါ။ စာလုံးပေါငျးရခကျတဲ့ စကားလုံးတှကေို ကြှနျတျောပွနျအစဖျောပွီး မှတျမိအောငျ လုပျတဲ့အခါတိုငျး ဒီနညျးလမျးက ထိထိရောကျရောကျ ရှိလှပါတယျ။
အောကျမှာတော့ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ကြောငျးသားတှေ ဖနျတီးထားတဲ့ mnemonic တှပေါ။
‘to lose’ – un-oh, I’ve lost an ‘O’ (အိုတဈလုံး ပြောကျသှားပွီ) (loose နဲ့ မမှားရအောငျ မှတျတဲ့ နညျး)
အကွံပွုခကျြ ။ Memrise ဆိုတဲ့ ဆိုဒျမှာ သုံးစှဲသူတှေ ဝိုငျးပွုစုထားကွတဲ့ ‘memes’ ဆိုတာမြိုးတှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ မိမိကျိုယျတိုငျ တီထှငျ ဖနျတီးမယျဆိုရငျတော့ စကားလုံးတှကေို ပိုပွီးမှတျမိမယျ့ အခှငျ့အလနျးပိုမြားတာပေါ့။
၆။ အခြိနျခွားပွီး ပွနျရှတျဆိုသုံးစှဲတဲ့ နညျးလမျးသုံးပါ
စကားလုံးအသဈတှကေို အကွိမျကွိမျပွနျလညျ ရှတျဆိုကကျြမှတျပေးတာဟာ မှတျဉာဏျမှာ စှဲစပေါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တဈနတေ့ညျးမှာ ဝေါဟာရအသဈတှကေို အကွိမျရာပေါငျးမြားစှာ ရှတျဆိုကကျြမှတျတာဟာ spaced repetition လို့ချေါတဲ့ ရကျမြားမြား သို့မဟုတျ အပတျမြားမြား ကာလတဈခုထဲမှာ ပွနျလှနျဆှေးနှေးပွီး ကကျြမှတျတာလောကျ ထိရောကျမှုမရှိပါဘူး။ ဝေါဟာရအသဈတှကေို ခကျြခွငျးအသုံးပွုပါ။ ပွီးတော့ တဈနာရီလောကျခွားပွီးတော့မှ မှတျမိသေးလား ပွနျစဉျးစားကွညျ့ပါ။ အိပျယာမဝငျခငျ နောကျတဈခါ စဉျးစားပွီး နှေးပေးပါ။ နောကျထပျတဈရကျလောကျခွားပွီး ပွနျသုံးပါ။ နောကျဆုံးအနနေဲ့ နောကျ ၂ ရကျလောကျအကွာမှာ ပွနျလှနျလလေ့ာပါ။
အကွံပွုခကျြ ။ ရကျရှညျ ကာလ ‘spaced repetition’ platform နဲ့ ဝါကွ အပွညျ့ ရေးခပြွီး လကေ့ငျြ့လို့ရတဲ့ Anki လို software တှအေပွငျ မိမိကိုယျပျိုငျ ပွနျလှနျလလေ့ာရေး revision အခြိနျဇယားကို ရေးဆှဲထား နျိုငျပါသေးတယျ။ သငျ့စကားလုံး အသဈတှကေို ကဒျပွားလေးတှပေျေါမှာ တဈဖကျမှာ ဝါကအြပွညျ့ ရေးခထြားပွီး ကနျြတဈဖကျမှာ စကားလုံးရဲ့ အနကျအဓိပ်ပါယျ/ ဘာသာပွနျ/ ပုံစသညျတှပေါတဲ့ index card လေးတှေ လုပျထားပါ။ ပွီးတော့ အဲ့ဒီကဒျလေးတှကေို ပွနျလှနျ ကွညျ့ရှု မှတျသားဖို့ အခြိနျဇယားပွုလုပျပါ။ ကဒျပွားလေးတှကေို အစီအစဉျတဈကပြွုလုပျပွီး အမြိုးအစား ၃မြိုးခှဲလိုကျပါ။
အစိမျးရောငျ - နောကျထပျကွညျ့စရာ သိပျမလိုတော့တဲ့ စကားလုံးမြား
အဝါရောငျ - မကွာခဏ ထပျကွညျ့ပေးရမယျ့ စကားလုံးမြား
အနီရောငျ - အကွိမျမြားစှာ ထပျခါထပျခါ ကွညျ့ရမယျ့ စကားလုံးမြား စသညျဖွငျ့ ဖွဈပါသညျ။
ရ။ ဝေါဟာရရငျးမွဈကို ရှာဖှလေလေ့ာပါ။
စကားလုံးသဈတဈလုံးရဲ့ အဓိပ်ပါယျကို အဘိဓာနျမှာ ရှာမကွညျ့ခငျ အဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့ ဆိုလိုရငျးကို ခနျ့မှနျး စဉျးစားကွညျ့ပါ။ အဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့ မူလ အရငျးအမွဈ root အပွငျ prefix တှေ suffix တှကေိုပါ လလေ့ာပါ။ အကယျလို့ သငျက အခွား ဘာသာစကားအခြို့ကိုလညျး နားလညျမယျဆိုရငျ စကားလုံးတှရေဲ့ မွဈဖြားခံရာ တူညီမှုတှကေိုလညျး တှရှေိ့မှာ ဖွဈပါတယျ။ စကားလုံး အသဈတှရေဲ့ ပျေါပေါကျလာပုံ သမိုငျးကွောငျး အရငျးအမွဈကို သုတသေနလုပျပွီး လလေ့ာရငျ အဲ့ဒီစကားလုံး အသဈတှကေို ပိုမိုမှတျမိပါတယျ။
ဥပမာ Tea (လကျဖကျရညျ) ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ တရုတျစကား (Mandarin dialect ဖွဈတဲ့ ch’a နှငျ့ဆကျစပျတဲ့) t’e ဆိုတဲ့ Amoy dialect ကနေ လာတယျဆိုတာ သငျသိပါသလား။ ပွငျသဈ၊ စပိနျ၊ ဂြာမနီလိုဘဲ အင်ျဂလိပျစကားလုံး tea ဟာ အဲ့ဒီ Amoy စကား t’e ကို (ဟိုးရှေးရှေးက Dutch East India ကုမ်ပဏီက ဥရောပကို လကျဖကျရှကျ၊ လကျဖကျခွောကျတှစေပွီး မိတျဆကျပေးခဲ့ရာမှ စတငျပွီး) မှေးစား သုံးစှဲခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အလားတူဘဲ ရုရှားရဲ့ Chai (လကျဖကျရညျ) ဆိုတာဟာလညျး ဆားဗီးယား၊ ပါရှနျ၊ ဂရိ၊ အာရဘီနှငျ့ တူရကီတို့ရဲ့ လကျဖကျရညျကို ချေါတဲ့ စကားလုံးဖွဈတဲ့ Chai ကဲ့သို့ဘဲ လကျဖကျကို ရှေးရှေးတုနျးက တရုတျပွညျကနေ ကုနျသညျတှကေ ကုနျးကွောငျးကနေ ကုနျသှယျခဲ့ရာက ချေါဆိုခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အခုအခါမှာတော့ tea ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သငျကွားလိုကျတယျဆိုရငျဘဲ အငှတေ့ဈထောငျးထောငျး ထနတေဲ့ လကျဖကျရညျခှကျ ကလေးကို ပွေးမွငျပွီး သငျ့နိုငျငံကို လကျဖကျ ဘယျလို ရောကျလာသလဲ ဆိုတာပါ သိနျိုငျပွီပေါ့။
အကွံပွုခကျြ ။ စကားလုံးတှေ၊ အီဒီယံတှရေဲ့ စတငျရာ ရငျးမွဈတှကေို လလေ့ာခငျြရငျ Online Etymology Dictionary ဆိုတဲ့ ဆိုဒျဟာတျောတျောလေး ကောငျးမှနျပါတယျ။
၈။ မိမိကိုယျကို စကားလုံးအသဈတှနေဲ့ စိနျချေါကွညျ့ပါ
စိနျချေါတယျ ဆိုတဲ့ အသိတရားက သငျ့ရဲ့ ဦးဏှောကျကို နိုးဆှပေးပါတယျ။ စကားလုံးတှရေဲ့ အဓိပ်ပါယျအသဈတှေ၊ ဒါမှမဟုတျ စကားလုံးအသဈတှကေို ရှာဖှတှေရှေိ့စတေဲ့ game တှဟောသငျ့ရဲ့ ဝေါဟာရကို ကွှယျဝစဖေို့အတှကျ ပြျောစရာနညျးလမျးတှဖွေဈပါတယျ။
အကွံပွုခကျြ ။ Quizlet.com မှာ ဉာဏျစမျးတှေ၊ ဂျိမျးတှေ အမြားကွီးရှိပွီး ဝငျကွညျ့လို့ရပါတယျ။
စကားလုံးအသဈတှကေို (ဒါမှမဟုတျ စကားလုံးအသဈကိုထညျ့သုံးထားတဲ့ ဝါကတြှကေို) ခရြေးခွငျးအားဖွငျ့ အဓိပ်ပါယျရော စာလုံးပေါငျးအတှကျပါ သငျ့မှတျဉာဏျထဲမှာ စှဲလမျးနစေဖေို့ ကူညီပေးပါတယျ။ သငျ သို့မဟုတျ သငျသိတဲ့ သူတဈယောကျယောကျအတှကျ လကျတှကေ့တြဲ့ အကွောငျးလေးတှကေို တှေးပွီး ရေးခပြါ။
အကွံပွုခကျြ။ ။ အဲ့ဒီခရြေးထား၊ မှတျထားတဲ့ ဝါကတြှကေို ကိုယျ့အတှကျဘဲ ဒီအတိုငျး မှတျထားမယျ့အစား Folding Story လို့ချေါတဲ့ စာရေးတဲ့ ဂိမျးတှဆေော့တဲ့ ဆိုဒျမှာ အသုံးပွုလို့ ရပါတယျ။ ဒီဆိုဒျကတော့ ဝငျကစားသူ တဈယောကျစီက story ဇာတျလမျးတဈပုဒျမှာ စာတဈကွောငျး ဝငျရေးလိုကျပွီး နောကျတဈယောကျက နောကျတဈကွောငျးဝငျရေးကာ ဇာတျလမျးကို ဆကျဆကျပေးသှားရတဲ့ online writing game ကစားနညျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒီအှနျလိုငျး ကစားနညျးမှာ ပါဝငျကစားသူတဈဦးဆီမှာ စာတဈကွောငျး ဝငျရေးဖို့ သုံးမိနဈသာ အခြိနျရပွီး အဲ့ဒီ ကနျ့သတျအခြိနျအတှငျး ဝငျရေးတဲ့ စာကွောငျးတှအေပျေါ Like ရတဲ့ အရအေတှကျ အပျေါမူတညျပွီး အမှတျရပါတယျ။
၁၀။ လကျတှအေ့ကွောငျးအရာတှအေကွောငျး ပွောပါ
စကားလုံးအသဈတှကေို ဘယျလောကျဘဲ မှတျမိအောငျကကျြမှတျထားဦး မိမိလကျတှေ့ အသုံးပွုခါနီးမှာ လြှပျတဈပကျြ ထုတျသုံးတတျဖို့ လှယျကူမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါကို ပွောငျးလဲပဈဖို့ နညျးလမျးကတော့ အင်ျဂလိပျလို နှဈမိနဈ သုံးမိနဈစာလောကျ လုံးဝမရပျဘဲ မပွတျတမျးပွောတဲ့ မိမိရဲ့အသံကို အသံပွနျဖမျးထားပါ။ ပွောရမယျ့အကွောငျးအရာတှကေတော့ မိမိပတျဝနျးကငျြကအရာတှကေို ပွနျဖျောပွတာ၊ ဒါမှမဟုတျ တဈခုခုနဲ့ ပတျသကျလို့ မိမိရဲ့သဘောထားထကျမွငျခကျြတှကေို ပွောတာမြိုးတှေ ဖွဈပါတယျ။ ပွီးတော့မှ မိမိရဲ့ ပွောစကားတှကေို ပွနျနားထောငျရငျး ဘယျလိုစကားလုံးမြိုးတှေ သုံးသှားတယျဆိုတာ ပွနျနားထောငျပါ။ မိမိလလေ့ာထားပွီး ပွနျလညျအသုံးပွုလိုတဲ့ စကားလုံးတှကေို အသုံးပွုခဲ့ပါသလား။ စကားလုံးအသဈတှနေဲ့ အစားထိုးပွောလို့ရတဲ့ စကားလုံးအဟောငျးတှကေိုဘဲ ပွနျသုံးခဲ့ပါသလား။ ပွီးတော့မှ မိမိပွောငျးသုံးခငျြတဲ့ စကားလုံးတှနေဲ့ အစားထိုးပွီး ပွနျပွောတာကို အသံပွနျဖမျးတာထပျလုပျပါ။ ဒါဆို ပိုကောငျးပါသလား။
အကွံပွုခကျြ ။ The Polyglot Club လိုမြိုး အှနျလိုငျးဘာသာစကားလလေ့ာသူမြား ကလပျကို ဝငျပွိး တဈကမ်ဘာလုံးမှာ ရှိတဲ့ native speaker တှနေဲ့ မေးခှနျးတှေ မေးတာတို့၊ လကေ့ငျြ့တာတို့ လုပျလို့ရပါတယျ။
ဒါတှကေတော့ ကြှနျတျော ရဲ့ ထိပျတနျးအကွံပွုခကျြ ၁၀ ခုဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သငျ့ထံမှာ သငျ့အတှကျ အလုပျဖွဈမယျ့ ဒီထကျကောငျးတဲ့ အကွံဉာဏျတှေ နညျးလမျးတှလေညျး ရှိနျိုငျပါတယျ။ ကိုယျနဲ့ ကိုကျညီတဲ့ နညျးလမျးတဈခုခုရတဲ့ အထိ ဖျောပွခဲ့တဲ့ အကွံပွုခကျြတှကေို လကျတှစေ့မျးသပျကွညျ့ပါလေ။ အကောငျးဘကျကနေ အမွဲတမျးကွညျ့ပွီး မိမိလုပျသမြှကို ကနြေပျပွီး ပြျောရှငျပါစေ။
British Council Voices Magazine မှ Svetlana Kandybovich ၏ Ten ways to learn new words asalanguage learnerဆောငျးပါးကို ဘာသာပွနျဆိုထားခွငျး ဖွဈပါတယျ။
Permalink Reply by aungnaingthu on March 21, 2017 at 12:05
Good, i like this article. Thank you.
Permalink Reply by Aye Cho on May 27, 2017 at 11:03
Permalink Reply by toe myat nu on August 1, 2017 at 14:41
can't copy and can't share it. Help me pls!
Permalink Reply by Mr. Hein Thu on November 6, 2017 at 14:19
Permalink Reply by Ko Nyi Nyi on December 12, 2017 at 21:38
Permalink Reply by Thae Su on January 31, 2018 at 11:03
Permalink Reply by Zin Mar Aye on June 13, 2018 at 16:36